School-ka Abaarso: Iftiinka Baxaaya, Ishii Buktaay ku Bikaacso – Guban Media
May 26, 2018 Ali Mohamed 306 Views 0 Comments
Hargeysa, SL–Baryahan dad xumaha jecel oo samaha neceb ayaa weerar ku soo qaaday sumcadda dugsiga Abaarso ee Somaliland mahadisay. Guddiga sare ee waalidiinta ayaa si faahfaahsan uga warbixiyay dhaqanka, akhlaaqda, nolosha, tayada waxbarashada iyo xidhiidhka dhaw ee ka dhexeeya waalidka, ardayda iyo maamulka dugsiga.
Dad caloosha ka buka oo ay xaasidnimo ka tahay sida markasta ay uga xumaadan wax kasta oo wanaagsan oo Somaliland u soo kordha.
Qolo colaadoodu waxay salka ku haysa siyaasad, waxay ka soo horjeedaan isticmaalka Passport-ka Somaliland ee ay ardaydu ku tagto Maraykanka iyo waddamada ay ka helaan deeqaha waxbarasho. Waxay u arkaan in ay tahay aqoonsi dadban.
Koox kale iyagu waa war moog lagu shubto wararka been abuurka ah iyo Propaganda-da ah oo haddii wax laga waydiiyo ku jawaaba ‘dadkuba way lahaayeen’, waana qolooyinkii Ibraahin Gadhle (AHUN) sheegay ee uu ku lahaa: Maskaxdaadu ayay noqon maqal lagula leeyahay, ayaan 10 muftaax iyo lagu furan masaabiir.
Qaybta afraad waa Cabdimaalik Muuse Coldoon iyo saaxiibadii oo sida la tuhunsan yahay sahan u ah kooxaha argagaxisada ah oo uu si cilmiyaysan ugu baraarujinayo ama ugu tilmaamayo meelo uu ka mid yahay dugsiga Abaarso iyo bartilmaameedyo kale oo ku kala yaalla magaalooyinka Somaliland iyo Soomaaliya.
← Burkina Faso breaks ties with Taiwan in fresh blow to island
Mideast Rivals Target New Regions →